Miverina i TinyUmbrella hamonjy ny SHSH | Vaovao IPhone
Rehefa elaela, lava loatra, tsy lazaina intsony ny TinyUmbrella sy ny SHSH, dia toa velona indray ireo mpijirika taloha ary iray amin'ireo malaza indrindra, notcom, dia namoaka beta an'ny TinyUmbrella, ilay rindrambaiko ho an'ny Mac sy Windows izay Io dia namela anay hametraka ny firmware izay notadiavinay tamin'ny iPhone sy iPad. Toa miverina ireo andro taloha ireo ary na dia tsy ampy antsipirihany aza izahay fa ilay notaom-piraisana iray ihany dia nampanantena antsika fa homena tsikelikely izy ireo, afaka manangana na mampidina ilay kinova araka ny fanirianay fa mety ho lasa zava-misy indray. Azavainay ny fisaorana an'i TinyUmbrella vaovao.
Ho an'ireo vao tonga izay mbola tsy nahare momba ity rindrambaiko ity dia azo fintina mora foana ny andraikiny: mitahiry sonia Apple (SHSH) hahafahanao mametraka ny kinova iOS rehefa tsy sonia azy intsony i Apple, satria namonjy ny tenantsika izy ireo dia afaka manao sonia azy io ary "manala baraka" ny lohamilin'i Apple. Ahoana no anaovanao an'izany? Eny, amin'ny fomba tena tsotra amin'ity kinova TinyUmbrella vaovao ity izay azonao sintonina ho an'ny Mac sy Windows avy amin'ny pejiny ofisialy. Tadidio fa tsy maintsy apetraka eo aloha amin'ny solosainao ny Java. Raha vantany vao tafapetraka sy mihazakazaka ianao dia mila mampifandray ilay fitaovana fotsiny ary ho alainao avy hatrany ireo sonia ireo (SHSH). Araka ny filazan'ny mpanoratra azy manokana: tsy misy safidy hafa intsony, tsy misy zavatra hafa azo atao. Iray ihany ny bokotra, raha sanatria ka tadiavintsika ny sonia OTA (fanavaozana ny OTA, avy amin'ilay fitaovana mihitsy).
Fa inona izany? Eny, amin'izao fotoana izao tsy misy dikany, fa notcom kosa dia milaza amintsika koa fa «raha tsy nisy nilana azy ireo dia tsy ho nanelingelina ny fanavaozana ny fampiharana ianao«. Antenaina fa hisy fomba vaovao havoaka vetivety hamela ny fametrahana an'i iOS miaraka amin'ireo sonia ireo. Mandra-pahatongan'izany, ny tsara indrindra azontsika atao dia ny mitazona ny SHSH ary mijery hatrany ireo vaovao miseho amin'ity lafiny ity, izay mazava ho azy fa holazainay aminao amin'ny iPad News.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 8 » Miverina i TinyUmbrella hamonjy ny SHSH anao
DrXimo dia hoy izy:
Manana iPhone4 aho izay tiako ny mampihena ny endriny 6 na ny 5 mba hanitarana ny androm-piafaran'ny terminal, satria amin'ny kinova ankehitriny (7) dia miadana be ny zava-drehetra ...
Hanampy ahy ve ity programa ity? MISAOTRA
Valiny amin'i DrXimo
Amin'izao fotoana izao dia tsy dia mahalala firy momba ny zavatra mety hatolony isika, mila miandry vaovao misimisy kokoa isika.
Cheats ho an'ny iOS 8 (II): Aza manelingelina
Araho ny Formula 1 avy amin'ny iPhone sy iPad-nao